Ụlọ ọrụ ngwaahịa | Ndị na-emepụta ngwaahịa na ndị na-ebubata ngwaahịa China
Ụgbọ ala ụfọdụ ka nwere sistemu breeki drum, nke na-arụ ọrụ site na brum drum na akpụkpọ ụkwụ breeki. breeki Santa nwere ike ịnye ịgbà breeki maka ụdị ụgbọ ala niile. A na-achịkwa ihe nke ọma yana ịgbà breeki na-edozi nke ọma iji zere ịma jijiji.
Santa breeki na-enye diski breeki ụgbọ ala azụmahịa maka ụdị gwongworo na ụgbọ ala dị arọ. Ogo nke ihe na arụ ọrụ bụ klas mbụ. A haziri diski ndị ahụ nke ọma na ụdị ụgbọ ala ọ bụla iji mepụta ọrụ breeki kacha mma.
Anyị nwere ụzọ ziri ezi nke ime ihe, ọ bụghị naanị na ngwakọta nke ihe, kamakwa n'ichepụta ha - n'ihi na mmepụta nke ọma bụ ihe dị mkpa maka nchekwa, enweghị mkpọtụ na braking dị mma.
breeki nke a na-ejikarị na ụgbọ ala azụmahịa dị arọ. breeki Santa nwere ike ịnye ịgbà breeki maka ụdị ụgbọ ala niile. A na-achịkwa ihe nke ọma yana ịgbà breeki na-edozi nke ọma iji zere ịma jijiji.
Mpempe breeki dị ala (Low-Met) dabara adaba maka ịrụ ọrụ yana ụdị ịnya ụgbọ ala dị elu, ma nwee ọkwa dị elu nke abrasives ịnweta iji nye ike nkwụsị nke ọma.
Ụdị breeki Santa nwere ihe ndị a iji nye ike nkwụsị pụrụiche yana ogologo nkwụsị dị mkpụmkpụ. Ọ na-eguzogidekwa brek ka ọ daa na oke okpomọkụ, na-ebuga pedal brek na-enwe mmetụta n'apata mgbe ọ gbasịrị ọkụ. A na-atụ aro paịkị breeki ọla anyị dị ala maka ụgbọ ala na-arụ ọrụ dị elu nke na-eme ịnya ụgbọ ala ma ọ bụ ịgba ọsọ, ebe ịrụ ọrụ breeki kacha mkpa.
Santa breeki na-enye diski nkịtị maka ụdị ụgbọ ala si China. Ogo nke ihe na arụ ọrụ bụ klas mbụ. A haziri diski ndị ahụ nke ọma na ụdị ụgbọ ala ọ bụla iji mepụta ọrụ breeki kacha mma.
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị breeki drum volvo, Pads breeki na-arụ ọrụ, Ụgbọ ala breeki, mpe mpe akwa breeki akpaaka, Ụgbọala akpụkpọ ụkwụ breeki, diski breeki,